के तपाईंको कम्प्युटरले विण्डोज ११ सपोर्ट गर्छ ? यसरी थाहा पाउनुहोस् - Birgunj Sanjalके तपाईंको कम्प्युटरले विण्डोज ११ सपोर्ट गर्छ ? यसरी थाहा पाउनुहोस् - Birgunj Sanjalके तपाईंको कम्प्युटरले विण्डोज ११ सपोर्ट गर्छ ? यसरी थाहा पाउनुहोस् - Birgunj Sanjal
वीरगन्ज । माइक्रोसफ्टले विण्डोज ११ को घोषणा गरेपछि कम्पनीले नयाँ अपरेटिङ सिस्टमका लागि न्यूनतम आवश्यकता समेत प्रकाशित गर्‍यो । दशकभन्दा लामो समयमा न्यूनतम आवश्यकता अगाडि सारिएको यो पहिलो पटक हो । यसको सहजताका लागि कम्पनीले एउटा एप ल्याएको छ, जसको नाम हो ‘पीसी हेल्थ’ ।